[ February 26, 2020 ] Mareykanka oo sheegay in ay duqeyn ku dileen sargaal sare oo Al-Shabaab ah oo gacan ka geystay weerarkii saldhiga Manda Bay	Somalia
[ February 25, 2020 ] Shirkada Hormuud oo sheegtay in mid kamid ah shaqaalaheeda lagu dilay duqeyn uu Mareykanku ka fuliyay Jilib	Somalia
Maxkamada ciidamada Jubbaland oo toogasho ah ku fulisay saddex nin oo lagu eedeeyay dilal. [Xigashada sawirka: Jubbland TV]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Duqeyn Mareykanku uu ka fuliyay gudaha Soomaaliya ayaa lagu dilay sargaal sare oo katirsan Al-Shabaab kaasoo gacan ka geystay weerarkii bishii hore ee saldhiga Mareykanka ee Kenya, sida ay sheegeen milatariga Mareykanku Talaadadii. [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Shirkada Hormuud ayaa sheegtay in mid kamid ah shaqaalaheeda lagu dilay duqeyn uu Mareykanku ka geystay deegaanka Jilib ee gobolka Jubbada Hoose. Masuuliyiin katirsan shirkada Hormuud ayaa warbaahinta u sheegay in ninka duqeynta [...]
Al-Shabaab oo ugu yeeray Madaxweynaha Mareykanka ‘maalqabeen maskax laawe ah’
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ururka hubaysan ee Al-Shabaab ayaa caayay Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyaga oo ugu yeeray “maalqabeen maskax laawe ah”. Muuqaal uu sii daayay website-ka The SITE Intelligence Group shalay oo Axad ahayd oo ay [...]
Garowe-(Puntland Mirror) Two Al-Shabab fighters were arrested in Garowe earlier this week, security sources confirmed to Puntland Mirror. The two fighters were arrested in joint operation carried out Puntland Intelligence Army (PIA) and Puntland Counterterrorism [...]